Nice !!! Porsche Panamera GTS Sport Turismo Nice !!! Porsche Panamera GTS Sport Turismo - LFOTPP
Akụkụ Audi Q8
Nice !!! Porsche Panamera GTS Sport Turismo
Porsche agbakwụnyela ụdị ihe ngosi abụọ ọzọ na Panamera. Na arụ ọrụ dị ike site na V8 biturbo engine (338 kW / 460 hp), usoro ịgba chaa chaa dị ike tinyere mgbatị ụgbọ elu na-emepụta ihe, na ihe ndị dị iche iche nke ha na ngwá ọrụ ha, Porsche Panamera GTS na Panamera GTS Sport Turismo na- ngwugwu-arụ ọrụ nke-a-ụdị. Dịka ị ga-atụ anya n'aka ụlọ ọrụ GTS, ihe ngwongwo bụ isi dị oke. Dịka ọmụmaatụ, ngwongwu Sport Design na ihe mpụta mpụta na nnukwu ihe Alcantara dị n'ime ime dị ka ọkọlọtọ. Kedu ihe ọzọ, Porsche amụbawo ngosipụta nke nkasi obi na usoro ntinye aka iji tinye nhazi ihuenyo na nhọrọ dị iche iche nhazi maka dum Panamera.
N'ime ụdị Ponsche Panamera GTS ọhụrụ bụ V8 engine nke nwere 338 kW (460 hp) nke anọ na-emepụta na mpempe akwụkwọ kachasị elu nke 620 Nm, na-azụlite mmetụta nke mmetụta ụda na nke ịnya ụgbọ ala mgbe ejikọtara ya na egwuregwu ịgba chaa chaa. -a. Mkpụrụ ígwè biturbo, bụ nke na-egosipụta nchara gasoline, gosipụtara 15 kW (20 hp) na 100 Nm nke bu ya ụzọ, na-emepe Porsche Panamera GTS na Panamera GTS Sport Turismo site na 0 ruo 100 km / h na 4.1 sekọnd ka ọ na-arụ ọrụ na con -azụ na ọkọlọtọ Sport Chrono Package. Ụdị abụọ ahụ mezuru 292 na 289 km / h, dịka. Enweghị mgbochi ọ bụla na-arụ ọrụ dị ka a na-ebute ike na Porsche Traction Management (PTM) site na ngwa elekere ụkwụ anọ nke PDK. A na-enweta arụmọrụ ha nke ọma na iji 10.3 l / 100 kilomita (Sport Turismo: 10.6 l / 100 km) na-eji nwayọọ nwayọọ eme ihe; o nwere otu XXMXXX nke gwakọtara na 2 g / km (Sport Turismo: 235 g / km).
Ezubere iji gosipụta ihe ngosi egwuregwu nke Panamera GTS ụdị, usoro chassis dị ezigbo egwu. Nkwụsịtụ ikuku na-emepụta ihe na teknụzụ nke atọ dị mma dịka ọkọlọtọ, nke na-eme ka njikwa na-agbanwe agbanwe ma gbasaa nnukwu mmiri. Ejirila 10 mil-limetres kwatuo egwuregwu chashis abụọ ahụ, ebe ọ bụ na ọrụ Porsche Active Suspension Management (PASM) emeela ka a gbanwee maka ọbụna ihe ngosi egwuregwu. Nsonazụ ahụ? Ọdịiche dị n'akụkụ mpụta. Nnukwu frek (390 millimeters na dayameta n'ihu, 365 millimeters na azụ) na-akwado usoro ogologo oge.
Ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere onye bu ụzọ, a na-emelite ngwa ngwa nke Porsche Panamera GTS dị iche iche n'ọtụtụ ebe. Egwuregwu Egwuregwu na-eji ogho dị n'ihu ma n'azụ azụ, na ihe ndị ọzọ na-agba ọchịchịrị na-eme ka ọ pụta ìhè karị. Ụdị GTS na ejiji 20-inch Panamera Design dịka ọkọlọtọ. Ihe ndị dị n'ime imepụta ihe oyiyi nke nwa Alcantara na nke aluminum aluminum. Ngwaọrụ ọkọlọtọ na-agụnye igwegharị ụkwụ na-agba ọkụ na-arụ ọrụ dị egwu na nkedo na-agbanwe agbanwe na Alcantara mkpụmkpụ na nkwonkwo Connect Plus maka ọrụ dị iche iche nke dijitalụ. Site na ngwugwu GTS na-arụ ọrụ, ndị ọkwọ ụgbọala nwere ike ịhazi ụgbọ ha na ihe dị iche iche dị iche iche, dị ka ngọngọ counter, ọkpụkpọ mmepụta, na GTS logos dị iche iche nke Carmine Red ma ọ bụ Crayon.
Ụdị GTS na-enye ụdị mgbanwe ndị ahụ dịka ọgbọ Panamera nke ọgbọ abụọ. Ndị a na-agụnye Porsche Advanced Cockpit nke dijitalụ, usoro enyemaka dịka Porsche InnoDrive gụnyere njikwa ụgbọ mmiri na-edozi, na nhọrọ azụ azụ. GTS na-egosiputa otu ihe dị ọhụrụ nke na-egosi dum Panamera - ngosi nke isi. Ihe ngosi ahụ nwere ike ịhazi site na onye ọkwọ ụgbọala na pro-ject ozi niile dị mkpa na-abanye kpọmkwem n'ahịrị anya ha na agba.
Dịka ọdịnala na Porsche, GTS na-anọchite anya Gran Turismo Sport. Ejila 904 Carrera GTS, bụ 1963 Carrera GTS, kwadoro ụzọ ụgbọ okporo ígwè mbụ, na-aga azụ na 924, na-eweta nkà na-agba ọsọ n'okporo ámá. Nke a bụ 928 GTS na 1980 GTS, nke mepụtara echiche ahụ na 90s na 2007s. Na 2011, GTS mere ememeghachi ya na Carrera GTS. Ọgbọ mbụ nke Panamera GTS soro na 4, na mbido dị ka naanị saloon egwuregwu. Ugbu a, Porsche Panamera GTS dị ọhụrụ dị ka egwuregwu Turismo. Site na nnukwu tailgate, sụlị dị ala, mpịakọta ogwe dị elu na nhazi 1 + 2017, ụdị ọhụrụ GTS dabeere na ụdị ndị a na-egosipụta na XNUMX na-agbaso ụkpụrụ kachasị elu maka ịkwọ ụgbọala kwa ụbọchị, na-enyekwa ọrụ ngosi.
Igwe igwe biturbo asatọ na-enye ike dị ike, arụmọrụ na njem nlegharị uche
Panamera GTS ọhụrụ na Panamera GTS Sport Turismo na-erite uru site na otu V8 biturbo engine dị ka Panamera Turbo ụdị. N'oge mmepe, ndị ọrụ engine Porsche lekwasịrị anya n'ịhụ na arụmọrụ kachasị mma na arụmọrụ dị iche. N'ịgba ọsọ n'etiti 6,000 na 6,500 rpm, ígwè ọrụ anọ dị na Porsche Panamera GTS na-ebute mmepụta elu nke 338 kW (460 hp), na-akọwapụta 4.8-liter V8 engine na nke mbụ site na 20 hp. Ọnụ ọgụgụ kachasị nke 620 Nm - 100 Nm karịa ihe nlereanya mbụ - dị na ọsọ ọsọ n'etiti 1,800 na 4,500 rpm. Usoro ọhụrụ nke asatọ ahụ na-eme ka Panamera GTS na Panamera GTS Sport Turismo si 0 gaa 100 km / h na 4.1 sekọnd n'ihi ọkọlọtọ Sport Chrono Package. Saloon rutere ọsọ nke 200 km / h na naanị 15.4 sekọnd; egwuregwu Turismo na-eme otu ihe na 15.6 sekọnd. Gran Turismo rutere elu nke 292 km / h mgbe Sport Turismo gafere n'elu 289 km / h. A na-enweta arụmọrụ ha n'ụzọ zuru ezu na iji 10.3 l / 100 kilomita (Sport Turismo: 10.6 l / 100); o nwere otu XXMXXX nke gwakọtara na 2 g / km (Sport Turismo: 235 g / km).
N'iburu n'uche njedebe nke oke ntanetịpụ na-esite na ụkpụrụ EU ọhụrụ maka European Union na ndị ahịa ndị ọzọ na-etinye ụkpụrụ ya n'ọrụ, mmalite nke ụdị Porsche Panamera GTS ọhụrụ ga-ahụ ụgbọ ala niile maka ahịa ndị a dabara na gasoline particulate nhazi, nke a ga-etinyekwa na ụdị Panamera niile site na afọ ọhụrụ. Ya mere, ha kwadoro ụkpụrụ Euro 6 d-Temp (EU6 BG) dị ka C6b na China. Ihe nkedo nke sere akara a nke yiri akara a yiri udi ntinye maka ihe di iche iche di diesel, obu ezie na enwere mmeghari ndi odi mkpa iji gboo ihe ndi choro maka ugbo ala. A na-eji gasị na-ekpuchi gas na-ekpuchi ya, na-amanye gas ka ọ na-agafe na mgbidi nke nhicha ahụ. A na-agbanye ego nkwụnye ego na usoro nhazi ọghachị.
N'iji ihe eji eme ihe, usoro asatọ nke cylinder bụ V-engine arụnyere ogologo oge ya na ogo ego nke 90 degrees. Enwere ike ịgbanwe ihe nkedo anọ na mkpochapu nke 50 ma nwee ikikere site na ígwè ịgba ígwè. Igwe valve anọ nwere ike iru ngwa ngwa ruo 6,800 rpm ma nwee ngbanwe nke 3,996 cm3. Ihe nyocha nke ntanetị nke V8 biturbo kpọmkwem nke na-agbazi mmanụ petrol bụ nke ọhụrụ turbo ọnọdụ ya na turbochargers nke dị n'ime V, injectors na etiti nke ụlọ nkwụsị, usoro mmanụ usoro dakọtara, dị ala -agbanye mkpuchi n'elu ihe na-edozi ya na mmiri na-arụ ọrụ.
Egwuregwu nke na-eme ka egwuregwu na-agba chaa chaa na ejiri mmiri ejiri ya na-arụ ọrụ na-eme ka V8 engine nwee ọgaranya.
Central turbo okirikiri na-emesi ike torque na ala revs
V8 engine na Panamera GTS ọhụrụ na-egosiputa oke arụ ọrụ, ọbụna na njedebe dị elu nke mgbanwe na ike. N'otu oge ahụ, igwe elekere asatọ ahụ nwere ike ịmepụta oge kachasị na ọsọ ọsọ. Ndị a na-arụ ọrụ ụgbọala bụ isi na teknụzụ na-ebugharị biturbo dị na steeti turbo. Ejiri ikuku na-eji nwayọọ nwayọọ na-eme ka ikuku na-eme ka ikuku na-eme ka ikuku dị na V8. Mkpụrụ abụọ ahụ na-agagharị na ntụziaka ndị ọzọ ma na-ebunye ọgbọ kachasị elu, ọbụna na ọkwa dị ala kachasị elu. Ndị turbochargers na-enweta nrụgide ụgwọ kachasị elu nke ogwe 0.8. Onye na-emepụta ihe site na ikuku ọkụ gas na-agbaji ikuku oriri maka turbocharger ọ bụla. Iji kwe ka injin ahụ gbanwee nke ọma, usoro ikuku na-agbafere alaka abụọ dị iche iche. Mgbe ha na-agafe n'aka ekpe na aka nri dị n'etiti site na V8, ikuku ikuku site na mpụga ụgbọala ahụ gafere site na ndagwurugwu nke ọ bụla n'akụkụ aka ekpe na nke aka nri. Ndị na-ahụ maka osisi na-ebelata obere okpomọkụ nke usoro ikuku mgbe a kpochara ya ọkụ n'oge usoro mkparịta ụka. Nke a na-akwado njupụta nke ikuku, na-amụba ikuku oxygen na cylinder ma meziwanye arụmọrụ dị ka nsonaazụ.
Otu njirimara isi nke ihe niile Panamera engines bụ ebe dị mkpa nke injectors na nnukwu valves ha na-ebugharị n'ime ụlọ ọkụ. Igwe V8 na Panamera GTS na-eji valvụ nwere oghere asaa. Ngwurugwu ndi mmadu n'otu aka na-enyere aka ebuli combustion, si otú a belata onodu emis na onu ahia. Porsche na-eme nke a n'oge ọ bụla ọ na-arụ ọrụ. Ndị injinia ya ejirila injectors mee ihe mgbe ọ na-amalite, ebe ndị na-emegharị catalytic na-ekpo ọkụ, ebe engine na-enwu ọkụ na ebe ọkụ ahụ na-ekpo ọkụ. A na-eji ụlọ akụ cylinder kwụnye mgbapụta dị elu na nrụgide nrụgide nke 250 mmanya.
Ngwunye gas na-ekpochapu ya na ndị na-emegharị catalytic n'ime V
A na-eji ngwá ọrụ V8 kwadoro usoro ihe mkpofu nke okpukpu abụọ na mbụ na ndị isi na-eme ka ndị na-agbanwe agbanwe gbakwunyere na ndị na-agba ume. N'okwu ndị e ji eme ihe, engine asatọ ahụ na-emepụta cylinder yiri nke etiti turbo dị na ya na ndị na-eme ka ndị na-emegharị ahụ dị n'ime V, nke dị nso na injin ahụ. Nhazi a na-achota na usoro nchịkwa nke na-ekpo ọkụ na-erute okpomọkụ dị mma n'obere oge. Ọzọkwa, a na-eme ka ihe ọkụkụ na-ekpo ọkụ kpụ ọkụ n'ọnụ n'oge mmepe mmalite site na imepe valveger wasteve valve.
Ihe nkedo ígwè n'ime ihe eji eme ihe na-eme ka mmanu na mmanu ghara idi
Otu n'ime ihe ndị na-eme ka V8 pụta bụ mkpuchi ígwè na mgbanaka cylinder na nkedo nkedo nke alọta. Mmetụta a na-ebelata esemokwu nke ụlọ, na-eyi (ọbụlagodi mgbe ị na-eji mmanụ dị ala), na oriri mmanụ. N'ime usoro mmepụta, a na-ekpuchi elu nke cylinders site na nkwụsị ígwè nke na-adịghị mma, nke na-eji ígwè ígwè na-eme ihe dị nro site na iji usoro ntanetị plasma. Ihe mkpuchi ahụ bụ naanị 150 micro-mita oke. Ngwunye ígwè a na-ewepụ kpamkpam ihe ọ bụla ị na-eyi ka ọ na-eyi n'arụgharị na ntanetị. Ejila pistons a na-eme ka a na-atụgharị ọkụ elee anya na-agbanwe ya na eriri ọhụrụ ahụ. Ihe nkedo piston nwere nchikota chromium nitrite, nke zuru oke na mkpuchi ígwè Mgbe achikota ya, ihe nile a na-eme ka mmanu mmanu di ozo ruo na 50% tụnyere onye ozo.
Enwee ike ịnweta mmanụ, ọbụna na agba ọsọ
Onye ọ bụla Porsche ga-enwe ike ijide onwe ya na track. Porsche Panamera GTS ọhụrụ na-eji obi ike eme ihe ịma aka a - na-ekele ekele maka usoro mmanụ ha ọhụrụ. Nchịkọta ya na-eme ka o doo anya na ọbụna ike kachasị elu na nke ogologo oge na-eme ka ndị mmadụ nwee ike ịgbatị. Akụkụ dị mkpa nke usoro ihe a bụ eziokwu ahụ bụ na a na-ekeba mmanụ ndị dị na alaka abụọ dị iche iche - otu maka engine na otu maka isi nke cylinder. A na-ahazi oghere ndị a na-enweta n'ime usoro ndị a na nke ọ bụla n'ime usoro mmanụ. N'oge mmalite, nke a nwere mmetụta dị mma na oge ọ dị mkpa iji rụgide nrụgide na mmanụ. A na-akwado ngwa ngwa nke nrụgide na-akwado site na valvụghachi azụ na mgbapụta mmanụ. Valvụ a na-ahụ na nnukwu mmanụ dị n'ime V adịghị alaghachi azụ na mmanụ na-agba ọsọ. A na - ewuli mmanụ mmanu site na mgbapụta mmanụ na-agbanwe agbanwe kpamkpam, a pụkwara ịhazi ya na map njirimara kpọmkwem site na valvụ. Valvụ a na-achịkwa na-abata na njedebe mmanụ na-agbanyeghị aka, nke a na-arụ ọrụ na-akpaghị aka n'oge oge ntanetị nke engine na na okpomọkụ dị ala. Dabere na ọchịchọ, eriri eletrik na-agbanwe agbanwe na etiti nke ime V na-achịkwa piston na-achịkwa map na-agbanye nozzles iji mee ka pistons dị jụụ. Ọrụ nchịkwa a na-ebelata nkwụsị na-agbagha ma na-achịkwa ego mmanụ. N'ihi ya, ụdị GTS nwere ike ịnagide nnukwu ọganihu na ogologo oge na Nürburgring nke a ma ama Nordschleife.
Ejiri dị ka ọkọlọtọ: Ngosipụta Oge Nlekọta Ihe ngosi na bọtịnụ Egwuregwu
N'ịbụ nke a kwadoro n'ụzọ zuru ezu maka ịnya ụgbọ ala, ihe ọhụrụ Panamera GTS dị iche iche nwere ọkọlọtọ Sport Chrono Package with Launch Control and switch switch, tinyekwa bọtịnụ Sport Response na steering wheel. Ekele maka ọnọdụ ya na stere ụkwụ, ngbanwe nke ịgbanwe agbanwe na-enye onye ọkwọ ụgbọala ohere ịnweta ụzọ elekere ụgbọala anọ (Nkịtị, Sport, Sport Plus na Onye ọ bụla). Ọnọdụ Sport Plus bụ ezigbo maka egwu ahụ. Ọnọdụ a gbanwee drivetrain ka o wee nwee ike ịnapụta nzaghachi nke ezigbo ụgbọala na ọganihu kachasị elu. Kedu ihe ọzọ, chassis components - dịka nkwụsịtụ ụgbọ elu, Porsche Active Sus-pension Management (PASM) na nhọrọ Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport), Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) na azụ axle steering - gbanwee gaa na ọnọdụ egwuregwu maka arụmọrụ zuru oke. Ihe ntanetịime Egwuregwu ahụ dị n'etiti etiti mgbanwe. Igodo a na-anapụta ikike kachasị nke Panamera maka 20 sekọnd na naanị aka nke bọtịnụ. N'oge a, nzaghachi nke engine dị nnọọ mfe na n'enweghị ihe ọ bụla. PDK na-agbanye na map kaadị na-agbanye ike karị karịa na Sport Plus, gbanwee nzaghachi na njedebe n'etiti 3,000 na 6,000 rpm (ma ọ bụrụ na a pịa bọtịnụ ahụ n'ọrụ zuru oke). Mgbanwe mgbanwe na-eme n'oge na-adịghị anya.
Porsche asatọ ọsọ PDK maka nkasi obi kachasị na nkasi obi
Dị ka ụdị Panamera ndị ọzọ niile, nsụgharị GTS ndị ọhụrụ na-abịa na windo elekere asatọ na-agba ọsọ. N'okwu n'ozuzu, ọsọ asatọ PDK na-enye ohere maka mgbasa ozi ọma na-agbasa ma na-emepụta mmanụ ụgbọala dị mma, ebe ọ ka na-enye nkasi obi kachasị mma na oke ọrụ. Nke ahụ bụ n'ihi na ihe nke asaa na nke asatọ bụ nke a na-edebanye aha dịka nkwụsịlata nkwụghachi nke nkwụsị. Enwere ike ịme ọsọ ọsọ n'ogo isii. Panamera nke asatọ na-agba PDK nwere ike igbanwe gear n'emebughị ike nrụrụ n'ihi na nhazi nke ọzọ ga-adị na-echere na nku, dị njikere ka arụ ọrụ n'ime akụkụ nke abụọ. Egwuregwu a na-eji egwu egwu ma ọ bụ ihe atụ nke PDK bụ ihe zuru oke maka egwuregwu dị iche iche nke ihe ọhụrụ Porsche Panamera GTS.
Ejikwa wheel anọ na-arụ ọrụ na-ejikwa igwe na-achịkwa njirika multi-plate
Panamera GTS na Panamera GTS Sport Turismo na-enyefe ikike n'okporo ụzọ site na ọrụ Porsche Traction Management (PTM) - otu ígwè ọrụ igwe wheel anọ na-arụ ọrụ, na-ejikwa ihe igwe na-achịkwa, ejiri atụmatụ mgbasa ozi multi-plate. Dabere na ọnọdụ ịkwọ ụgbọala, njigide ikuku multi-plate na-agbasa ike engine n'etiti etiti azụ na azụ iji nweta ịrụ ọrụ kachasị mma mgbe niile. Igwe PTM na-agbanye ọsọ ọsọ na-agba ọsọ ụkwụ, ọsọ ọsọ na-agafe agafe, na ikuku ntụzi. PTM na-enye arụ ọrụ zuru oke, na-eche ma ma ụzọ ọ dị akọrọ, mmiri ma ọ bụ kpuchie na snow.
Usoro chassis na chassis
N'ihe banyere Panamera echiche, chassis na ụdị GTS ọhụrụ na-enyekwa nkasi obi nke ihe eji eme njem ọma na arụmọrụ nke ụgbọ ala. Otú ọ dị, e nyewo ya ihe mgbakwunye siri ike iji nweta ihe omume GTS mara mma. A na-arụkwa ntụsara ahụ ụgbọ elu nke na-eji ihe ndị ọzọ na Panamera arụ ọrụ dị ka ọkọlọtọ na ụdị GTS ọhụrụ. Site na teknụzụ nke okpukpu atọ, usoro mgbasa ozi a na-enye nchịkwa dị mfe ma gbasaa ụba mmiri dị mma. Ejiri 10 millimeters dị ka ọkọlọtọ na-adabere n'ụdị GTS abụọ ahụ, ebe Porsche Active Suspension Management (PASM) emeela ka ọ bụrụ na a kwadoro ya maka ihe egwuregwu, ya mere, na-ebute arụmọrụ a na-atụ anya ya site na ngwa GTS. Nsonazụ ahụ? Ọdịiche dị n'akụkụ mpụta.
Nnukwu ugbochi na-akwado nkwado dị ogologo oge. Kedu ihe ọzọ, atụmatụ nyocha nke ọrụ Nlekọta 4D Chassis Control na synchronises niile chassis usoro na ezigbo oge iji hụ na ọ bụ ezigbo ụgbọala. Ụdị Porsche Panamera GTS ọhụrụ nwere ike ịmepụta ọbụna ọrụ dị omimi karịa usoro nke nhọrọ, dị ka Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport) gụnyere Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), na azụ axle nduzi.
Akwụsịtụ ikuku dakọtara na teknụzụ atọ nke ejiji dị ka ọkọlọtọ
Panamera GTS na Panamera GTS Sport Turismo nwere ihe nkwụsị nke ikuku atọ dịka ọkọlọtọ. Usoro a emewo ka osisi ahụ dị elu, karịsịa mgbe ọ bịara ịkasi nkasi obi. A na-eji usoro ụlọ ikuku atọ nwere usoro ọ bụla, nke ọ bụla nwere ike ịrụ ọrụ n'otu n'otu, si otú a nye ọtụtụ ọnụego mmiri. Dịka ọmụmaatụ, ndị ọkwọ ụgbọala nwere ike ịtọ chassis na ala mmiri dị ala, nke na-eme ka enwere nkasi obi, n'ihi na ọnụego mmiri nwere ike gbanwee nke ọma na ọnụọgụ abụọ nke abụọ mgbe ọ bụla achọrọ - dị ka mgbe ị na-emegharị, na-emegharị ma ọ bụ na-ebelata na-agagharị agagharị.
Mere maka onye na-eme egwuregwu: Porsche Ọrụ Suspension Management (PASM)
Ụkpụrụ Porsche Active Suspension Management (PASM) bụ usoro ọrụ nchịkwa na-elezi anya. Usoro ahụ na-agbaso ụzọ elu okporo ụzọ na ụdị ịkwọ ụgbọala nke ugbu a, na-agbanwezi mgbe niile ịkụda mmiri maka wiilị nke ọ bụla. A na-edozi ndị na-egwu mmiri na Porsche Panamera GTS dị iche iche maka nzaghachi egwuregwu, na-ahụ na ụgbọala ndị ahụ na-ebute arụmọrụ na-arụ ọrụ ma na-eme ka njirimara dị iche iche nke ala ahụ dị. N'ozuzu ha, ndị ọkwọ ụgbọala nwere ike ịhọrọ ụzọ atọ ụgbọala: Normal, Sport or Sport Plus. Ya mere, olee otu PASM si arụ ọrụ? Sensọ na-edekọ ahụ na wheel wheel na-emekarị n'oge ọganihu ngwa ngwa, nkwado ụkwụ, na-ebugharị ngwa ngwa ma ọ bụ na-ebugharị n'okporo ụzọ okporo ụzọ. PASM na-eziga data ọ na-edeba na ọrụ Porsche 4D-Chassis Control. Ogige iwu ahụ na-eme ka ọnọdụ ụgbọ ala ugbu a gbanwee ma na-achịkwa akara njirimara nke PASM na ụda mmiri nkwụsịtụ na-emegharị na-adabere na nhọrọ ahọrọ. Site na 4D Chassis Control, enwere ike idozi ya na usoro ọzọ nke chassis eletrik iji nyefee ọrụ kachasị.
Usoro 48-volt: PDCC Sport active roll stabilization including PTV Plus
Ọrụ Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport) na-eji 48-volt na-arụ ọrụ nke ọma na-eme ka ụgbọala dịkwuo mma na ndị na-eme ka ndị na-emepụta ihe ọkụkụ. Usoro a na-eme ngwa ngwa karia usoro nwere ihe omume hydraulic, na-eme ka ndị na-eme ka ahụ sie ike iji belata mpịakọta na ahụ. Na Panamera, Porsche jikọtara ọrụ PDCC Sport na Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus). Igwe a na-ahụ maka eletrik na-eme ka mkpọchi dị iche iche na-eme ka ọkpụkpụ ụgbọala gbasaa n'agbata n'azụ n'azụ, mgbe wiil-ịmegharị aka na-eme ka ihe nkedo ọzọ na azụ azụ. Nsonazụ ahụ? Ọbụna nchịkwa ndị ọzọ na-achịkwa ag-ile. Kedu ihe ọzọ, PTV Plus na-eme ka mmagharị dị mma ma ọ bụrụ na ị na-emegharị site na nkuku site na ịpị iche iche.
Ntughari uzo na-eme ka mmuo di elu na nkwụsi ike ogologo oge
Usoro Panamera GTS ọ bụla nwere ike ịkwado nhazi azụ azụ. N'ebe dị ala na-agba ọsọ gburugburu 50 km / h, steepụ ụkwụ azụ - na ọnụego mgbanwe na-adabere na ọsọ ụgbọ - na nke ọzọ na-aga n'ihu ụkwụ elu ruo n'ogo steepụ nke 2.8 degrees. Nke a kwekọrọ na mmepe nke wheel-base. Ihe ndị a na-agụnye nchịkwa nlekọta dị ike karị, dịkwuo mfe imeghari, na ebe nchekwa dị mma na ntụpọ. N'elu ọsọ ọsọ ọsọ, ụkwụ ndị azụ na-adabere n'otu ntụziaka ahụ dị ka ihe na-aga n'ihu, ọzọ dabere na ọsọ. Ya mere, wheelbase na-eme ka ọ dịkwuo ogologo, si otú ahụ na-arịwanye elu, dịka ọmụmaatụ mgbe ọ na-agbanwe okporo ụzọ n'okporo ụzọ. Ntugharị na-agba ọsọ na-enye ohere maka nchịkwa steeti na-aga n'ihu n'ihu, ya mere okwu nchịkwa ahụ nwere mmetụta dị egwu nke egwuregwu. Ndagharị uzo na-emekarị ka nchekwa dị mma, na-agba ọsọ na nkasi obi.
Porsche 4D Control Chassis
Porsche 4D Chassis Control bụ netwọk etiti nke usoro nchịkwa. Ọ na-enyocha ọnọdụ ọkwọ ụgbọala ugbu a n'akụkụ atọ ọ bụla (ogologo oge, n'akụkụ na mpempe akwụkwọ), na-agbakọ ozi gbasara ọnọdụ ụgbọala. Mgbe ahụ, ọ na-ejikọta usoro a nke chassis na nke a na-emepụta na oge - na-agbakwụnye nke anọ iji chassis control. N'ihi ya, usoro ahụ na-enyeghachi aka na njedebe n'ọdụ ụgbọ ala na-agba ụgwọ. Otu ihe atụ: Ọ bụrụ na ị na-eduzi ụkwụ na ikuku, akara PASM na kọmputa na-ejide onwe ya, nkwụsịtụ ụgbọelu na-emegharị ahụ, nlekọta azụ azụ, PTV Plus na PDCC Sport rụọ ọrụ dịka otu iji kwado nzaghachi nlekọta ahụ na ịdị na-arụ ọrụ na nkwụsi ike. Porsche 4D Control Chassis na-eziga nchịkọta niile na sistemụ chassis ngwa ngwa ka ọkwọ ụgbọala ahụ malitere iduzi. Nke a na-enye ohere ka usoro ahụ meghachi omume na mmalite oge ma nweta oke arụmọrụ n'akụkụ nkuku.
Nnukwu ugbochi maka nduhie oke
Uzo nke usoro ihe nkedo eji eme ihe - ihe nkedo isii di iche iche bu ndi nnochi anya n'ihu, ndi na-eme ka mmadu kwusi n'azu - enwere uba iji gosiputa ikike nke Panamera GTS. Ndị isi awọ na-eji ígwè na-emegharị uhie na-eme ka ndị na-akpọ uhie uhie na-eme ka mkpuchi nduhie. Mpempe akwụkwọ nkedo a na-arụ ọrụ n'ime ụlọ nwere nha 390 x 38 millimeters na axle n'ihu na 365 x 28 millimeters n'azụ). Ụdị Porsche Panamera GTS nwekwara ike ịnweta ya na Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), nke a nwalere na nyocha ahụ.
Ụdị abụọ GTS dịka ọkọlọtọ na wiil 20 nke anụ ọhịa Panamera na-achacha achacha. 275 / 40 ZR 20 taya n'ihu na 315 / 35 ZR 20 taya n'azụ na-eme ka ọ dị mma.
Ọdịdị dị mma na ngwa ngwa
Ụdị GTS ọhụrụ ahụ na-egosipụta ọnọdụ pụrụ iche ha dị ka ụgbọala ndị na-eme egwuregwu n'ime ụdị ọkwá dị mma nke kachasị mma egwuregwu ha na ngwa ha. Panamera GTS na Panamera GTS Sport Turismo bụ 5,053 millimeters ogologo, 1,417 millimeters ogologo na 1,937 millimeters n'obosara. Nnukwu wheelbase nke 2,950 millimeters na-agbatị n'agbata ahụ dị mkpụmkpụ nke ahụ. Ejiri ụdị abụọ a dị ka ndị na-eguzogide na wiil 20 nke anụ ọhịa Panamera, nke a na-ese na nwa na-arụcha ihe na-acha silk.
Ụkpụrụ Egwuregwu Egwuregwu na ihe ngosi ndị ojii
N'ọdị n'ihu, ụdị GTS dị iche na ụdị ọrụ Panamera ndị ọzọ na-adabere na ha ọhụrụ Sport Design n'ihu apron na egbugbere ọnụ ojii. Dị ka ọkọlọtọ, ọkụ ọkụ ọkụ, gụnyere Porsche Dynamic Light System (PDLS), ọkụ ọkụ ụbọchị anọ, ọkụ ọkụ ọkụ, usoro ntanetị ọkụ na ọkụ na-eme ka ọhụhụ dị mma n'abalị. Ọchịchịrị ikanam matriks ọkụ ọkụ gụnyere PDLS Plus na 84 n'otu n'otu activatable LEDs dị dị ka nhọrọ. Egwuregwu Ejiji na-acha odo odo na-eme ka ihu abụọ GTS dị anya, na-eme ka atụmatụ ha rụọ ọrụ. A na-ese foto windo ndị dị n'akụkụ na-acha uhie uhie dị ka ọkọlọtọ na ọnụ ụzọ ụzọ na-agụnye GTS leta. Black bụkwa agba na-acha azụ na n'azụ, ebe Sport Design rear apron, "PORSCHE" logo na akara ngosi niile na-egosi njedebe kwekọrọ. Ejiri ejima abụọ ahụ na-eme ka usoro ịgba chaa chaa mara mma na-adịkwa oji. Umu ahihia ndi mmadu di iche iche na uzo di iche iche nke ndi mmadu, ha nwere ike ime ka mmadu di iche iche di iche iche di iche iche. A na-ejikọta onye na-apụnara azụ na-emegharị azụ na-agagharị n'egwuregwu egwuregwu dị na ọkọlọtọ eletrik, nke a kwadoro dị ka ọkọlọtọ. Na Porsche Panamera GTS, nku ahụ na-agbawa mgbe ọ gbatịrị iji mepụta ebe dị elu karị. Nke a na-emekwa ka ndị na-emechi azụ na-arịwanye elu ọsọ ọsọ.
N'ime, Panamera na-agwakọta nkasi obi dị elu, ụdị egwuregwu ahụ maka Porsche na nhazi ihu-azụ na oke ogo nke mgbanwe. Ụdị GTS abụọ ahụ na-egosipụtakwa ìhè dị iche iche nke egwuregwu ma na-enye nnukwu ngwaọrụ nke ọkọlọtọ. Ogwe egwuregwu egwuregwu 18 na-emegharị, eletrik na-echetara ma ọ bụrụ na onye ọkwọ ụgbọala na onye na-aga n'ihu na-akwado ezigbo akụkụ nke ndị njem na ọtụtụ ụlọ ahịa. Ogwe oche oche dị na Alcantara, nke na-ekpuchikwa oghere ndị dị na ọnụ ụzọ, ọhụụ anyanwụ, isi ihe, na ogidi A, B na C. Ngwaọrụ ọkọlọtọ na-agụnyekwa ọkpụkpụ ụgbọ elu na-agba ọsọ na-agba chaa chaa na Alcanta-ra, ihe nkedo na-agbanwe agbanwe, na mgbanwe ọnọdụ maka Sport Chrono Package. Enwere ike ịchọta logos GTS n'ọnụ ụzọ ntinye ọnụ ụzọ, nkwụghachi azụ na ijide isi. A na-enwekwa ike ịchọta mgbidi mgbaghachi azụ na Carmine Red ma ọ bụ Pencil.
Enwere ike imekwu n'ime ime ihe ngwugwu GTS. Nke a na-agụnye belt oche, ntinye akwụkwọ na-akpụkwa n'elu oche, na ịkwanye akwa na oche na ala akwa na agba dị iche iche Carmine Red ma ọ bụ Crayon.
Porsche Advanced Cockpit na ọkọlọtọ njikọ online
Otu njirimara n'ozuzu nke ọhụụ Porsche Panamera nke abụọ bụ ngosipụta digi-tal na njikwa arụ ọrụ - ụkpụrụ Porsche Advanced Cockpit na ntụpọ na-emetụ aka na ngosipụta nghazi. Ngosiputa ihu igwe abuo abuo na-eme ka ikpo okorita okwu. Otu 12.3-anụ ọhịa touchscreen na console center na-arụ ọrụ dị ka ọrụ kachasị na njikwa na usoro Porsche Communication Management (PCM) gụnyere ịntanetị igodo. Usoro nke Infotainment dị mfe ma nwee ike iji ya mee ihe, a pụkwara imegharị ya ka ọ bụrụ ihe nchịkọta onwe ya. N'ihi na kọlọtọ ndị a kọwapụtara, ndị ọkwọ ụgbọala nwere ụzọ dị mfe ma dị mfe ịmepụta ihuenyo ụlọ ha jupụtara na ọrụ ha kachasị mma, dị ka ebe redio kachasị amasị ha, ebe ụgbọ sat-aga, nọmba ekwentị ma ọ bụ ọrụ nkwụsị ọrụ egwuregwu. Enwere ike ịgbakwunye wijetị ozi na akụkụ aka nri nke ihuenyo HD zuru oke, na-enye ndị ọrụ ịnweta ọrụ ndị ọzọ na PCM. Dị ka ọmụmaatụ, enwere ike iji mpaghara mmekọrịta n'etiti etiti ahụ gosipụta ọdụ ụgbọ mmiri, ebe aka nri dị maka ọrụ ekwentị. Enwere ike ịhazi ọkwa profaịlụ isii. Tinyere ọtụtụ ntọala ime, profaịlụ ndị a nwere usoro ntọala kachasị mma maka ọkụ, usoro mmepe na usoro enyemaka.
Ndị ọrụ nwere ike ijikọ ekwentị ha ma ọ bụ smartphones na modulu Connect Plus. Panamera nwere nkwụnye ekwentị LTE na kaadị SIM kaadị. Ekele maka kaadi SIM wuru na ya, Panamera niile nwere ike ịnọ na ntanetị oge niile dị ka ọkọlọtọ ma ọ bụrụ na ọchọrọ. Enwere ike ịchọta ihe ọmụma oge maka usoro igodo ngwa ngwa na nke a pụrụ ịdabere na ya, na-achọpụta nyocha ngwa ngwa nke ọnọdụ ọnọdụ okporo ụzọ ugbu a na ụzọ ntụgharị ụzọ nke dy-namic. A na-enweta ọtụtụ ọrụ Porsche Connect ndị ọzọ. Maka nyocha zuru ezu nke Njikọ Jikọọ dị na ndụmọdụ na ụgbọ ala ọ bụla, biko lee www.porsche.com/connect.
Ntughari mbido mbụ na panamera
Ụkpụrụ dị iche iche ma ọ bụ usoro enyemaka maka nhọrọ ga-eme ka njem dị mma ma dị mma na ụdị Panamera GTS ọhụrụ. Usoro ntanetị dịka ọrụ Lane Change Assist na Lane Keeping Assist gụnyere njirimara akara ngosi okporo ụzọ ugbu a jikọtara ya na nhazi nke mbụ na Panamera. Usoro ngosi a gosipụtara ozi ụgbọ ala niile dị mkpa n'ime ụzọ ọhụụ nke ọhụụ na col-anyị. Ihe ndị ọzọ na-agụnye usoro Porsche InnoDrive na Ntanetị. Ihe ọhụrụ a na-eji igwefoto ntanetịime akọwa ndị mmadụ na ụmụ anụmanụ buru ibu n'ebe dị anya ruo mita 300. Mgbe ahụ, ọ na-eji ịdọ aka ná ntị na-acha agba na nkpa ọdụdụ iji mee ka onye ọkwọ ụgbọala mara. Ọ bụrụ na ọkụ eletriki ọkụ ọkụ ọhụrụ nke ọkụ ọkụ na 84 na-arụ ọrụ na nke ọ bụla dị na ya, ndị na-ahụ nke ọma n'èzí n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ dị ntakịrị na-egbukepụ obere oge ma ọ bụrụ na ha dị n'ime eriri ahụ a gbakọrọ, na-ekwe ka onye ọkwọ ụgbọala zaghachi n'oge.
Idozi nsogbu na onye ọkwọ ụgbọala: Porsche InnoDrive na Traffic Jam Enyemaka
Ọrụ Porsche InnoDrive gụnyere nduzi ntanetị nwere ike ichekwa n'ihu. Dabere na akụkụ atọ, data ntinye na mkpebi elu dị elu, usoro ahụ na-agbakọ ma mee ka ọganihu kachasị elu na nduzi nduzi dị ka ihe nkedo na njem ụgbọ mmiri maka kilomita atọ ọzọ. Na-arụ ọrụ dịka onye na-arụ ọrụ na kọmputa, ọ na-echebara akụkụ ya anya, na-agbatị na ọsọ ọsọ. A na-edepụta ụgbọ ala ndị ọzọ na ọsọ ọsọ ugbu a site na usoro mgbasa ozi radar na nke dabeere na vidiyo ma tinyezie ya na nzaghachi ụgbọala ahụ. E gbasawokwara ọtụtụ usoro enyemaka maka ikpuchi ọnọdụ ebe ịkwọ ụgbọala Porsche abụghị ihe ụtọ niile - mgbochi okporo ụzọ. Usoro okporo ụzọ jam na-akwado onye ọkwọ ụgbọ ala site na-eduzi ogologo oge na ntanetị nke ụgbọ ala na mberede okporo ụzọ na-agba ọsọ ruo 60 km / h. Ka ọrụ ACC na-achịkwa ya, ụgbọ ahụ nwere ike ịgbaso ọdụ ụgbọ mmiri a mara nke ụgbọ ala na-akwado ya, nke nwere ike ịme ka ọ dị mfe n'oge ọ bụla.
Ngosipụta ihu na nhọrọ nhọrọ
N'ịdabere na mwepụta nke ụdị GTS ọhụrụ ahụ, Porsche na-ebute nhọrọ nhazi nke nhọrọ maka ụdị Panamera niile. Enwetarala na Cay-enne, usoro ihe eji eme ihe na-acha ọcha-ụgbọala dị mkpa n'ime ụzọ nke ọhụụ. E gosipụtara ngosipụta nke isi na-adabere na windo ahụ kpọmkwem n'ihu windscreen. Maka onye na-akwọ ụgbọ ahụ, ngosi ahụ na-egosi na 2.3 na-aga n'ihu nke ụgbọala ahụ, ozugbo ha na-ahụ ụzọ. Ogologo, nchapụta na ntụgharị nke nwelite elu nwere ike gbanwee. A haziri ntọala na iche iche kpọmkwem na usoro Porsche Communication Management (PCM). Ndị ọkwọ ụgbọala nwere ike ịhọrọ site na ozi dịgasị iche iche iji rụọ ọrụ na windscreen, dịka ntụziaka sat-nav, data enyemaka data, ịdọ aka ná ntị na ihe omume ndị ọzọ. A na-ekewa mpaghara ngosi ahụ na mpaghara isii dị iche iche.
Ndị ọkwọ ụgbọala nwere ike ịhọrọ site na ntụziaka dị iche iche anọ dị iche iche, nke ọ bụla n'ime ha gosipụtara ọtụtụ ozi ve-hiki. Echiche nke isi na-elekwasị anya na ọrụ na ọnọdụ nke usoro enyemaka. N'etiti etiti dị n'elu gosiri otu ihe ahụ dị ka ngosipụta ụyọkọ ngwá ọrụ. Onyonye aka ekpe nke ngosi gosipụtara ihe ịrịba ama okporo ụzọ na-emetụta ụzọ nke ugbu a. N'etiti etiti ala ahụ na-egosi ọsọ ọsọ ugbu a. Ọ bụrụ na nduzi ụzọ na-arụ ọrụ, ntụziaka igodo na-apụta na nri nke ngosipụta ahụ. Na Sport Chrono mode, a na-agbakwunye ozi agbakwunyere na igwu egwu-isi. N'etiti etiti dị n'elu na-egosi nlele counter. Ọ bụrụ na nchịkwa Egwuregwu na-arụsi ọrụ ike, akuku aka nri n'elu gosipụtara oge fọdụrụnụ. Ihe ngosi egwuregwu ahụ gosipụtara na nri aka nri. Akụkụ aka ekpe na-enye onye ọkwọ ụgbọ ala na ihe ọmụma gbasara oge ụkwụ na lapụmba. Ihe ngosi ahụ kọmpụta na-eweghachi ihe nhazi ahụ na ngosipụta ahụ dị mkpa. Dịka ọmụmaatụ, ngalaba kachasị elu na-egosi na ịgba ọsọ ọsọ na ntụziaka. Ngalaba ala na-arụ ọrụ ịgba ọsọ ọsọ na enyemaka usoro ọnọdụ. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, onye ọkwọ ụgbọala nwere ike ịmepụta echiche ahaziri maka ngosipụta ahụ. Nke a na-enyere ndị ọkwọ ụgbọala aka ịhọrọ site n'aka onye ngosi. A na-ahazi ngosipụta ndị ọrụ na PCM.
Tụkwasị na nke ahụ, a na-egosipụta ozi ọnọdụ ọnọdụ n'agbanyeghị ọkwa nrụpụtara. Dị ka ọmụmaatụ, ihe atụ ịdọ aka na nti pụtara ma ọ bụrụ na ụgbọala ahụ nọ n'ihe ize ndụ nke ijikọta. Ngwaọrụ na-egosikwa ka ọ mara onye ọkwọ ụgbọala ma ọ bụrụ na enwere oku na-abata ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ejiri olu olu rụọ ọrụ. Ebe ọ bụ na ngosipụta ahụ na-agbanwe mgbe ọ bụla n'etiti ehihie na abalị, ọkpụkpọ egwu ahụ dị mfe ịhụ na oge kwekọrọ n'ụbọchị. N'aka nke ọzọ, ọkwọ ụgbọala ahụ nwere ike ịgbanwe ọkwa ahụ.
Ebube dị oke mma, onye na-emepụta ihe na-emebi ihe na ụlọ 4 + 1
Panamera GTS ohuru abughi nani dika ihe eji eme egwuregwu. Maka oge mbụ, ọ dị ugbu a dị ka Sport Turismo. N'okwu dị iche iche, ihe GTS na-enye uru nile nke egwuregwu Sport Turismo ọhụrụ na ọkwa ọhụụ ya. Azụlitela ụlọ elu dị iche na nke egwuregwu egwuregwu, na-eme ka ọ dịkwuo mfe ịbanye na azụ n'azụ ma na-amụba isi ụlọ. Ikike nke ogige ngwongwo na-abata site na steepụ oghere na-eji ígwè eletrik eletrik na obere ihe nkedo dị ala na nanị 622 millimeters. Ọ bụrụ na Sport Turismo nwere nkwenye nkasi obi, ụzọ ụkwụ dị mfe bụ ihe niile ọ ga-eme iji mepee ma ọ bụ mechie ọdụdụ dịka ụgbọala ahụ na-amata ndị ọrụ akwadoro site na igodo mgbagwoju anya. Dị ka ụdị egwuregwu Sportis Turismo niile, Porsche Panamera GTS nwere oche azụ atọ dịka ọkwa. Ebe ọ bụ na oche abụọ ahụ dịpụrụ adịpụ - dịka ntụrụndụ na nke ọma dịka ị ga-atụ anya site n'usoro isiokwu a - dịka oche nke onye ọ bụla, nke a na - apụta nhazi 2 + 1 n'azụ. Ndị ahịa nwere ike ịhọrọ maka oche abụọ nke a na-edozi maka nke azụ. Mgbe a na-ebuga ya n'isi nke oche ndị dị n'azụ, GTS Sport Turismo na-enye ikike ntanye nke 520 lita. Enwere ike ịpịa azụ azụ azụ azụ azụ azụ atọ ma ọ bụ ọnụ (nke 40: 20: 40) na-enwe ike ịmepụ ya site na ogwe akpa. Nhazi a na-eme ka olu ntinye ya gaa karịa nke 1,390 lita.
Porsche na-enyekwa ihe nchịkwa nhọrọ nchịkwa nke ogige maka Panamera Sport Turismo. A na-ahazi usoro a gbanwere iji zipu ụdị ihe niile na nha ma na-agụnye mgbanaka abụọ echedoro n'ime nnukwu ogige ụlọ ahụ, anya anọ na-agba ọsọ, na akụkụ nke oghere. A na-agụnye ọhụụ oghere dị arọ dị ka ọkọlọtọ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwanye laptọọpụ na-aga ịbịa nzukọ dị mkpa, a ga-eme nke a site na iji ogwe 230 V a na-ahọrọ n'ime oghere akpa.
Onye na-ekpuchi ihe na-ekpuchi ruo 50 kilogram nke mmezi
Panamera Sport Turismo ọkọlọtọ na-emebi ụlọ bụ ihe pụrụ iche na ụgbọala a cate-gory. E nwere ike gbanwee akụkụ ya na otu n'ime ntọala atọ dabere na nkedo ọdụ ụgbọ ala na ọnọdụ ịkwọ ụgbọala ịhọrọ. O nwere ike igbanye aka na 50 kilogram nke ụda ume na azụ azụ. Dịka akụkụ nke usoro Porsche Active Aerodynamics (PAA), a na-ewepụta onye na-apụnara ihe ngwa ngwa ruo 170 kilomita / h wee soro n'azụ ụlọ elu nke dị na nkwụsị nke asaa. Site na ọsọ ọsọ n'elu 170 km / h, onye na-eburu ụlọ na-ebugharị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na mgbakwunye otu ogo, na-eme ka nkwụsi ike na mgbatị dị n'akụkụ. N'ọkụgharị ụgbọala Sport na Sport Plus, onye na-eburu ụlọ na-eburu ebe a ọsọ ọsọ na 90 km / h. Dị ka ihe nkwado nkwado, PAA na-agbanwezi ọhụụ mbibi na mgbakwunye 26 degrees na-agba ọsọ site na 90 km / h ma ọ bụrụ na ọnụego ihe ngosi panorama na-emeghe. Ụkwụ a na-arụ ọrụ ọ bụla na-agba ọsọ ụgbọ elu ma na-ebelata mkpọtụ ụda.
Pịa ma Zụta Ngwa ngwa ngwa ahia
Nakwa na atụmatụ ọnụahịa 【LFOTPP】
Huaxia na-eme njem ịghọ onye na-eme mmepe nke ọdịda anyanwụ
Banyere Mercedes-Benz GLE site na LFOTPP】
The forester jikọtara ogologo ule, n'ihi na enwere m mmasị na ide ya